मेडिकल शिक्षा पद्धतिमा क्रान्ति अपरिहार्य पास हुनको लागि केके मात्र गर्दैनन् विद्यार्थीहरु। धनीमनीहरु फेकल्टी लाई महँगा गिफ्ट दिन्छन्। बिद्यार्थीहरु घरायसी कामसम्म गर्छन्। कोहि कोहि फेकल्टीहरु विदेशी विद्यार्थीबाट पैसा सम्म लिन्छन्। नेपालमा मेडिकल स्कुलमा फेल भएको ब्यक्तिले अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्स को परीक्षामा अल्मस्ट टप गर्छ यो असम्भव हुनुपर्ने हो तर सत्य हो र दुःखद पनि। आइतबार, माघ २३, २०७८
क्यान्सरको उपचार दिने र लिने बिरामीबीचको दूरी मेटाऔँ क्यान्सर रोगको उपचार महँगो छ। तर यसलाई रोकथाम गर्न भने सहज छ। त्यसैले सचेतना र सावधानी नीतिगत, व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न लबिङ गरिनुपर्छ। सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ राज्यको मुख्य अर्थतन्त्रको पाटो भनेर सँगै लिएर हिडिरहेको छ। शुक्रबार, माघ २१, २०७८
कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी ५ जिज्ञासा र उत्तर सामान्यतय लक्षणहरु हराएपछि लगाउन मिल्छ। तर २ हप्तापछि लगाउँदा सो समयसम्ममा संक्रमितहरु पूर्ण स्वास्थ हुने (लक्षण नदेखिने) र अरुलाई संक्रमण सार्ने सम्भावना पनि नहुने भएकोले सो समय तिर लगाउँदा राम्रो मानिन्छ। मंगलबार, माघ १८, २०७८
एलर्जी के हो? दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ? नेपालमा एलर्जी सम्बन्धी निदान, अनुसन्धान तथा उपचार सुरुवाती चरणमा छन्। यसका बाबजुद नेपालमा एलर्जीको कारक तत्व (allergen) पत्ता लगाउने बिधिहरु उपलब्ध छन्। आइतबार, माघ १६, २०७८
स्वरमा परिवर्तन? 'ओमिक्रोन भ्वाइस' पनि हुनसक्छ! 'ओमिक्रोन भ्वाइस' भन्नाले ओमिक्रोन संक्रमण भएपछि स्वरमा देखिने परिवर्तनलाई भन्न खोजेको हो। हाल धेरै संक्रमितहरुले घाँटी दुख्ने वा घाँटीमा केहि डल्लो चिज अड्केको जस्तो अनुभव गर्ने वा घाँटीमा असहज हुने र स्वर दबेको/धसेको वा परिवर्तन हुने अनुभव गरेका पाइन्छ। बुधबार, माघ १२, २०७८
किन हुन्छ हृदयघात? हुन नदिन के गर्ने? लक्षण र बच्ने उपाय हृदयघातका कारण विश्वमा १ करोड ७५ लाख मानिसको हरेक बर्ष मृत्यु हुने गर्दछ। हाल नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रमा पनि यसको प्रकोप बढ्दै गैरहेको छ। मंगलबार, माघ ११, २०७८
यसपटक कोभिडका रिपोर्टमा किन पहिला नेगेटिभ भएर पछि पोजिटिभ देखिँदैछन्? यसो हुनुको एउटा मुख्य कारण के हो भने यसपाली हामीमा आमरूपले पहिले भन्दा भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढी छ- पहिलेको संक्रमण वा खोपको कारणले। सोमबार, माघ १०, २०७८
नेपालमा मातृ मृत्यु: कारण र रोकथामका उपाय २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० प्रति १ लाख जिवित जन्म बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसको लागि मृत्युदरलाई हरेक वर्ष ७.५७ प्रतिशतका दरले घटाउनु पर्ने देखिन्छ। शनिबार, माघ ८, २०७८
पाठेघरको क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? क्यान्सर भनेको जुनसुकै अंगमा सामान्य भन्दा धेरै कोषिका बढ्ने हो। अक्सर महिलाहरु पाठेघर क्यान्सरको जोखिममा हुन्छन्। पाठेघरको क्यान्सर अन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा पाठेघरको भित्रपट्टिको क्यान्सर प्रमुख हो। शनिबार, माघ १, २०७८
के क्यान्सरका बिरामीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको बुस्टर डोज आवश्यक छ? अहिलेको बर्तमान परिस्थितिमा कोभिड–१९को तेस्रो लहर आउने लगभग पक्का छ। त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको विभिन्न खोपप्रति सर्वसाधारणबाट आइरहेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन लाग्दैछु। बिहीबार, पुस २९, २०७८
यी ५ लक्षणहरु देखिए ओमिक्रोन! खोप लगाउनेहरुमा संक्रमण हुन् सक्ने भए पनि जटिल अवस्था आउने वा मृत्यु हुने जोखिमलाई घटाउने विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र लेखकको अनुभवबाट देखिन्छ। बिहीबार, पुस २९, २०७८
गिजा तथा यस वरिपरीका सहयोगी भागमा आउने ७ समस्या र रोकथामका उपाय गिजा हाम्रो दाँतलाई वरिपरीबाट घर्ने नरम तन्तु हो। यसले दाँतलाई मजबुत राख्ने, राम्रो र आकर्षक देखिन सहयोग गर्ने र गिजा मुनिको हड्डीलाई समेत छोपेर त्यसको सुरक्षा गर्ने गर्दछ। शनिबार, पुस २४, २०७८
घुर्ने समस्या हुनेहरुका लागि गर्धन तथा मुखको कसरत धेरैजसो मोटो मानिसमा गर्धनको भागको श्वास नली साँघुरो हुनुको साथै निदाएको बेलामा श्वास फेर्दा गर्धन वरिपरिको मासंपेशीमा कम्पन पैदा हुन जाँदा घुरेको आवाज निस्कने गर्छ। सोमबार, पुस १९, २०७८
डिप्रेसनः महिलालाई किन बढी? अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा डिप्रेसन भएका मानिसहरु मध्ये करिव २० प्रतिशतले आत्महत्या गर्छन्। उपचार गर्दागर्दै वा निको भइसकेको अवस्थामा जीवनमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा आत्महत्या भएको हुनसक्छ। शनिबार, पुस १७, २०७८
रक्तचाप सम्बन्धी ८ जिज्ञासा तथा भ्रमहरू कहिले काहीँ रक्तचाप बढी हुँदा केही पनि लक्षणहरू नदेखिन सक्दछन्। बिरामीलाई केही अप्ठ्यारो नभईकन पनि रक्तचाप बढी हुन सक्छ। त्यसैले रक्तचापलाई सुषुप्त हत्यारा पनि भनिन्छ। शुक्रबार, पुस १६, २०७८
चिसो मौसममा बालबालिकालाई सताउने ‘आरएसभी’ संक्रमण के हो? लक्षण र उपचार जाडो बढेसँगै चिसो मौसममा देखिने धेरै रोगहरु पनि बढ्दै छन्। यी मध्ये रेस्पिरेटरी सिन्सिसल भाइरस (आरएसभी)को संक्रमण पनि तीब्र रुपमा बढदै छ। आरएसभी साना बालबालिकामा श्वासप्रस्वास सम्बन्धी संक्रमण गराउने सबैभन्दा प्रमुख कारण हो। मंगलबार, पुस १३, २०७८
ज्वरो बिनाको ओमिक्रोन? डेल्टाको लहरसम्म आइपुग्दा पनि यी तीन मुख्य लक्षणहरु निरन्तर देखिरहेका थिए। तर, ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिँदै जादा भने यी तीन क्लासिकल लक्षणहरु पछाडि पर्दै गएको विभिन्न अनुसन्धानहरु देखाएका छन्। सोमबार, पुस १२, २०७८
कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुप बी.१.१.५२९ 'ओमिक्रोन भेरियन्ट'- खतराको घन्टी दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना संक्रमणका नोभेम्बरमा संकलन गरिएका नमुनाको भाइरसको जेनेटिक सिक्वेन्सिङ (आनुवंशिक) अन्तर्गत अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा सार्स कोभ-२ को आरएनए अक्षरहरुमा उत्परिवर्तन पहिलेको डेल्टा भेरियन्ट (९ वटा परिवर्तन) को तुलनामा भन्दा ३ गुणा बढी (३२ परिवर्तन) देखिएकोले छ। मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
के हो धेरै पसिना आउने रोग 'हाइपरहाइड्रोसिस', कसरी हुन्छ समाधान? सामान्यतया हाम्रो शरीरले तापक्रम नियन्त्रणको लागि पसिना निकालिरहेको हुन्छ। हामी तनाबमा हुँदा वा अत्तालिँदा यो प्रकृया स्वभाविक रुपमा बढ्ने गर्छ। तर, हाइपरहाइड्रोसिस अर्थात् धेरै पसिना आउने भन्नुको अर्थ त्यो मात्रा पाँच गुणाभन्दा बढी हुनु पर्छ। सोमबार, मंसिर १३, २०७८
निद्राका अनेक समस्या र आरामदायी निद्राका घरेलु उपाय निद्रा कम लाग्ने समस्या धेरै मानिसमा पाइन्छ। खासगरी वृद्धावस्थामा निद्रा नलाग्ने समस्या बढी देखिन्छ। ओछ्यानमा गएपछि निदाउन धेरै समय लाग्ने, बारम्बार बिउँझने, बिहान चाँडै निद्राले छाड्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्। बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
चिसोमा छालामा देखिने रोग 'चिलब्लेन्स' के हो? कसरी जोगिने? वातावरण प्रदूषण, मौसम परिवर्तन र चिसोका कारण छालमा विभिन्न खालका रोग र समस्याहरु देखिन थालेका छन्। यी मध्ये जाडोमा चिसोले खाने छालाको रोग अर्थात् 'चिलब्लेन्स' धेरै मानिसमा देखिने गरेको छ। बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
नवजात शिशुहरुमा किन हुन्छ जन्मजात मुटुरोग? कुनै पनि महिला गर्भवती भएको सुरुको चार हप्ताभित्र मुटु बनिसकेको हुन्छ। गर्भवती भएको थाहा नपाउँदै मुटु बनिसकेको हुने हुँदा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको हुँदैन। सोमबार, मंसिर ६, २०७८
जाडोमा छालामा देखिने ८ रोग र समस्या, हेरचाह गर्ने ५ उपाय जाडोमा चिसो तापक्रम, थोरै सापेक्ष आर्द्रता र लामो समय हिटरमा बस्नाले छालाका कोशीकामा पानीको मात्रा कम हुने, छाला सुक्खा हुने, चिलाउने, पोल्ने र दुख्ने समस्या धेरै देखिने गर्दछ। यसका साथै जाडोमा धेरैलाई देखिने छालाका रोगहरु यसप्रकार छन्। शनिबार, मंसिर ४, २०७८
के हो ह्यान्ड, फुट एन्ड माउथ डिजिज? जाडो बढेसँगै साना बच्चाहरुमा यो रोग अलि बढी देखिन थालेको छ। ओपिडीमा दैनिक रुपमा बिरामी बच्चाको संख्या बढ्न थालेपछि यो विषयमा जनचेतना थप फैलाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
लामखुट्टेले कसलाई बढी टोक्दै छ? जापानमा गरिएको एक अनुसन्धानमा बियर प्रेमी (वा मापसे गर्ने) लाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने गरेको नतिजा देखाएको थियो। यसर्थ मापसे गर्ने बानी छ भने विशेषत लामखुट्टे सक्रिय हुने सिजनमा टोकाईको उच्च जोखिममा पर्नु हुनेछ। सोमबार, कात्तिक २९, २०७८
नेपालमा के- कस्ता प्रयोगशाला छन्? के-के पर्छन् बेला-बेलामा गर्नुपर्ने जाँचमा? ल्याबको काम अनुसार ल्याब 'ए' देखी 'इ' वर्ग सम्मका हुन्छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार यी प्रयोगशाला सन्चलनमा रहन्छन्। बुधबार, कात्तिक २४, २०७८
कोभिड महामारी र बालबालिकामा हुने मानसिक समस्या उपचारका लागि अस्पताल तथा फोनबाट परामर्श सेवा लिनेहरुको तथ्यांकका आधारमा हेर्दा ५/६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका देखि १७/१८ बर्ष उमेर समूहकामा समस्या देखिएको छ। मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८
चिसो मौसममा देखिने रोग र यसबाट बच्ने उपाय अब चिसो मौसम बढ्दै जाँदा चिसो मौसममा देखिने र पहिले भएका दीर्घकालिन बिरामीमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाने गर्दछ। यो लेखमा चिसो मौसममा देखिने रोग र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारे केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ। आइतबार, कात्तिक २१, २०७८
तिहारमा सजग बनौं: आगो तथा तेलले पोल्यो भने यसरी प्राथमिक उपचार गरौं तिहारमा आगो, पटका, झिलिमिली र सेल रोटी बनाउने क्रममा आगोले/तेलले पोलेर धेरै दुर्घटनाहरु समेत हुने गरेका छन्। तसर्थ यी सांस्कृतिक महत्व भएका चाडपर्ब मनाउँदा निकै सजक हुनु आवश्यक छ। बिहीबार, कात्तिक १८, २०७८